3D Foto Archives - LucidPix
Esi Jikwaa App Photo Access na iPhone iOS 14 Apple abụwo onye mmeri nke nzuzo nke ndị ahịa, ọ na-egosi. Ihe ngosi ohuru ha na iPhone na-enye ohere ka ndị ọrụ jikwaa ngwa onye ọ bụla na foto ha ...
Ntuziaka 9 maka Anụmanụ Ndị Na - akpali Anụmanụ bụ ụfọdụ isiokwu na - adọrọ adọrọ iji see foto. Speciesdị ọ bụla pụrụ iche n'ụzọ pụrụ iche nke aka ya, na-enye ohere maka plethora nke foto dị iche iche. Otú ọ dị, anụmanụ ...
Otu esi eme ememme nchedo dị nchebe n’oge mkpuchi: Ọtụtụ n’ime unu nwere ike na-ajụ onwe unu: “kedụ ka m ga-esi mee oriri abalị ekele n’afọ a n’etiti nsogbu niile COVID nwere?” CDC weputara ụfọdụ ntuziaka ndị dị mkpa ịgbaso maka ...
5 Atụmatụ iji mee ka foto ụmụaka kachasị mma na-eweta nwa ọhụrụ bụ ihe kpatara ememe, dịka oge pụrụ iche na-eso. Mgbe i mechara biri na ndụ ọhụrụ gị dị ka nne ma ọ bụ nna, oge foto ụmụaka bụ otu n'ime ihe ndị ọzọ na-esote ...